Somali News 09.17.21 | KWIT
Hoggaamiyeyaasha guurtida kulliyadda Jaamacadda Iowa State waxay rabaan inay awoodaan inay u baahdaan maaskaro gudaha fasalladooda. Intii lagu guda jiray faallooyinka dadweynaha Arbacadii, madaxweynaha senetarka kulliyadda Gobolka Iowa, Andrea Wheeler, ayaa sheegay in macallimiinta loo oggolaado inay u baahan yihiin maaskaro gudaha fasalladooda.
Go’aan maxkamadeed oo federaal ah toddobaadkan ayaa si ku -meel -gaar ah u horjoogsanaya sharciga Iowa ee ka mamnuucaya degmooyinka dugsiga iyo hay'adaha kale ee dowladda hoose inay u baahan yihiin maaskaro. Laakiin xukunka ma saameynayo jaamacadaha dadweynaha ee gobolka.
Heerka shaqo la’aanta Iowa ee bishii Ogosto wuxuu si joogto ah u ahaa 4.1% iyadoo tirada dadka shaqo la’aanta ah ay kor u yara kacday, wakaaladda gobolka ayaa sheegtay Jimcihii. Tirada dadka reer Iow ee bilaa camalka ah ayaa kordhay 300 ilaa 67,900, sida laga soo xigtay Horumarinta Shaqaalaha Iowa.
Heerka shaqo la’aanta Iowa ayaa ku jirta kaalinta 17aad qaran ahaan. Nebraska waxay lahayd heerka shaqo la'aanta ugu hooseysa ee dalka oo ah 2.2%.